Platform Archives | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner and Producer of NAB Show LIVE
ပင်မစာမျက်နှာ » Tag Archives: ပလက်ဖောင်း
Tag Archives: ပလက်ဖောင်း
လုံခြုံမှုရှိတဲ့အထုပ်များနှင့်ကြံ့ခိုင် Multi-DRM မီဒီယာ Workflows များအတွက်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Key ကိုချိန်း (SPEKE) API အတွက် Insys ဗီဒီယို Technologies ကကြေညာချက်များပံ့ပိုးမှု
Feature-rich OTT ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းအတွက် AWS-ဖွံ့ဖြိုးသတ်မှတ်ချက်များအတွက်ပံ့ပိုးမှုခိုးကူးဧပြီလ 2, 2019 ဆန့်ကျင်သောအကြောင်းအရာများကိုကာကွယ်ဘို့ encryption ကိုလုံခြုံရေးမရင်း - Dübendorf, ဆွစ်ဇာလန်: Insys ဗီဒီယို Technologies ကယနေ့ကုမ္ပဏီလုံခြုံတဲ့အထုပ်များနှင့်ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ Key ကိုချိန်း (များအတွက်ထောက်ခံမှုပေါင်းစည်းမူကြောင်းကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ ယင်း၏ပြည့်စုံ, Over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ကဗီဒီယိုဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာသို့ SPEKE) API ကိုသတ်မှတ်ချက်။ အမေဇုံက Web Services ကကတီထွင် SPEKE ...
nangu.TV ပလက်ဖောင်း၏ upgrade နှင့်မှတ်တမ်းအချိန်အတွက်လိမ္မော်ရောင်အားကစား Channel ကို၏ Launch
nangu.TV, IPTV နှင့် OTT န်ဆောင်မှုများအတွက်ရှေ့ဆောင်မီဒီယာပလက်ဖောင်းပံ့ပိုးပေး, လိမ္မော်ရောင် Slovensko နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် nangu.TV platform ပေါ်တွင် run အသစ်တစ်ခု OTT set-top box ကိုဝန်ဆောင်မှုကိုပွဲထုတ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ မကြာသေးခင်ကစလိုဗကျဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ချိခြင်း, အသစ်သောဖြေရှင်းချက်လိမ္မော်ရောင်ဖောက်သည်ဆိုမှာအသစ်ကပရီမီယံလိမ္မော်ရောင်အားကစားအားကစားလိုင်းများအပါအဝင်ယင်း၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်လိမ္မော်ရောင်ကို TV ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြု ...
Insys ဗီဒီယို Technologies က ORS လက်အောက်ခံ simpliTV များအတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်များ Enhanced OTT ဝန်ဆောင်မှု
Insys ဗီဒီယို Technologies ကသိသိသာသာတစ်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီရဲ့ပြည့်စုံ InsysPLAY ပလက်ဖောင်းသြစတြီးယားရုပ်မြင်သံကြား provider က ORS ကရွေးချယ်ခဲ့တာယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်: Dübendorf, ဆွစ်ဇာလန် - ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် InsysPLAY နည်းပညာပလက်ဖောင်းဦးဆောင်သြစတြီးယားထုတ်လွှင့် service provider ကမေလ 9, 2018 များအတွက်ပိုမိုကြည့်ရှုသူအတွေ့အကြုံများနှင့်ကြွယ်ဝသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖွ ORS လက်အောက်ခံ simpliTV များအတွက်တိုးမြှင့် OTT ကဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှု။ အဆိုပါ InsysPLAY ပလက်ဖောင်း simpliTV ပေးပါသည် ...
Insys ဗီဒီယို Technologies ကကြေညာချက်များ API ကို OTT ဗီဒီယိုစီမံခန့်ခွဲမှုချောမွေ့စေရန်အမေဇုံက Web Services ကအတူပေါင်းစည်းမှုနှင့် Delivery
ဧပြီလ 5, 2018 - Dübendorf, ဆွစ်ဇာလန်: Insys ဗီဒီယို Technologies ကယနေ့ over-the-ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီလုပ်ငန်း-class ကို InsysPLAY အကြား API ကိုပေါင်းစည်းမှု (OTT) ဗီဒီယိုကိုပလက်ဖောင်းနှင့် AWS ဒြပ်စင် MediaLive နှင့်ထံမှ AWS ဒြပ်စင် MediaPackage နှင့်အတူ၎င်း၏ InsysGO ဖြူတံဆိပ် OTT ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ အမေဇုံက Web Services က (AWS) မီဒီယာန်ဆောင်မှုများ။ AWS မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူသစ်ကိုအပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါမှာ InsysPLAY နှင့် InsysGO ဆန္ဒပြပွဲများအတွင်းမိတ်ဆက်ပြသပါလိမ့်မည် ...
ChyronHego ရဲ့ TRACAB Microsoft ကအားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ပလက်ဖောင်းများအတွက် Player ကို-ခြေရာကောက်စိတျအပိုငျးဘဝမှကယျတငျ
MELVILLE, နယူးယော့ - စက်တင်ဘာ 15, 2017 - တစ်ဦးကို Microsoft ဂိုဒေါင်စီမံကိန်းကို - ။ ChyronHego ယနေ့ယင်း၏ TRACAB (TM) ပုံရိပ်-based ခြေရာခံခြင်းစနစ်က Microsoft ရဲ့အားကစားဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပလက်ဖောင်းများတွင်ကျောက်ဆူးနည်းပညာများတစ်ဦးအဖြစ်ရွေးကောက်တော်မူခဲ့တာကိုကြေငြာခဲ့ပါတယ် အဆိုပါ hashtag အားကစား conference မှာယခုနှစ်အစောပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ပလက်ဖောင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားသင်း, အဖွဲ့ချုပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများထောက်ပံ့တဲ့ cloud-based အားကစား-analytics ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ် ...
အားလုံးကဗီဒီယို streaming များကို formats ကိုဖြတ်ပြီးသန့်စင်, စွဲငြိဖွယ်ရာမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံများကိုကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Unified လွှနှင့်အတူခြောက်ဆယ်မိတ်ဖက်
ခြောက်ဆယ်, အအပြန်အလှန်တီဗီကုမ္ပဏီ, ယနေ့တိုက်ရိုက်ချမ်းသာနက်ရှိုင်းသောအပြန်အလှန်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပလက်ဖောင်း streaming များဝန်ဆောင်မှုများကို powered လွယ်ကူများကိုအော်ပရေတာကို enable ရန်, စမတ်တွင်ဗီဒီယို streaming နည်းပညာဖန်တီးခြင်းအတွက် Unified လွှ, ရှေ့ပြေးနှင့်အတူသစ်တစ်ခုမိတ်ဖက်ကြေညာခဲ့သည်။ unified လွှနှစ်ခြောက်ဆယ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လွှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်ပြီးရောက်ရှိအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အာဏာရှိသည်ဖို့က၎င်း၏ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အော်ပရေတာဖောက်သည်ကို enable ပါလိမ့်မယ် ...
ကွမ်တမ်ရဲ့ဆုရ StorNext6ဖြန့်ချိအခုတော့သင်္ဘော Is
။ San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - သြဂုတ်လ 1, 2017 - Quantum ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: QTM) ယနေ့ StorNext 6, ပြီးသားမျိုးစုံစက်မှုလုပ်ငန်းဆုစပါးကိုရိတ်လိုက်ပါတယ်ကြောင်းယင်း၏ StorNext (R) လုပ်ငန်းအသွားအလာသိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်း၏အဓိကသစ်ကိုဖြန့်ချိ၏အထွေထွေရရှိနိုင်ကြေညာခဲ့သည်။ အခုတော့ Quantum ရဲ့ Xcellis (R) shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့တင်ပို့, StorNext6StorNext ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် 4K စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်အဆင့်မြင့်ဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်တွေကထပ်ပြောသည်။ [ဖို့ကိုနှိပ်ပါ ...
ဥရောပပွင့်လင်းသည်: DMC All-IP ကိုဗီဒီယိုတိုက်ကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝ virtualised ပလက်ဖောင်းလွှတ်တင်
စက်တင်ဘာလ 30 ရှေ့ဆောင်ပလက်ဖောင်းအားဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ် '' ပုဂ္ဂလိကထုတ်လွှင့်သောမိုဃ်းတိမ် '' ရာထူးဥရောပဖို့တံခါးပေါက်အဖြစ် DMC, ယနေ့ 80 channel များကိုပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် 2017 သည့်ဂုဏ်သတင်း IBC ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုကို (အကြောင်းအရာဖြန့်ဖြူးအတွက်ဆန်ခါတင်စာရင်းကတဆင့်သူ့ရဲ့ထူးချွန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်အသိအမှတ်ပြုဆန်းသစ် Full-IP ကို ​​virtualised ဆော့ဖ်ဝဲပစ်လွှတ် အမျိုးအစား) DMC ရဲ့ပလက်ဖောင်းကို real-time ဗီဒီယိုကို process နှင့်တိုက်ရိုက်တစ်ခု-အားလုံးချိတ်ဆက်ရန်ပါဝါအသုံးချ ...
ChyronHego Introduces တိုက်ရိုက် Panel များပလက်ဖောင်း Assist
MELVILLE, နယူးယော့ - ဧပြီလ 21, 2017 - ထို 2017 NAB ပြရန်မှာ ChyronHego တိုက်ရိုက် Panel များပလက်ဖောင်း Assist သရုပ်ပြပါလိမ့်မယ် - ကုမ္ပဏီ၏တိုက်ရိုက်တစ်ခု All-အသုံးပြုသူအသစ် interface နဲ့ control panel ကိုဖန်ဆင်းခြင်း tool ကိုပလေးအောက်ကိုအလိုအလျောက်စနစ်ကမိသားစု Assist ။ တိုက်ရိုက်လွှ Panel များပလက်ဖောင်း Assist ထိန်းချုပ်ဘို့ထုံးစံ-ဒီဇိုင်းအသုံးပြုသူ interfaces ၏ဖန်တီးမှု enable လုပ်ဖို့နောက်ဆုံးပေါ် multiuser က်ဘ်ဆိုက်နည်းပညာများကို leverages ...
Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များဖွင့်ပေးခြင်း ATSC 3.0 ၎င်း၏ကြီးထွားလာ Suite မှ MMTP ပံ့ပိုးမှုထည့်
Princeton, NJ - ဧပြီလ 18, 2017 - Triveni ဒစ်ဂျစ်တယ်ယနေ့ယင်း၏ GuideBuilder (R) XM အချက်ပြခြင်းနှင့်ကြေညာချက်မီးစက်နှင့် StreamScope (R) XM MT ပလက်ဖောင်းယခုလွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုကိုအလိုလိုသိ tools များကြောင့်အလွယ်တကူထုတ်လွှင့်ပေးခြင်း, MMTP protocol ကိုထောကျပံ့ပေးကြောင်းကြေညာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ATSC 3.0 ROUTE (Unidirectional ပို့ဆောင်ရေးကျော်အချိန်နှင့်တပြေးညီ Object ကိုဖြန့်ဝေ) နှင့် MMTP (MPEG မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးပရိုတိုကော) ထောက်ပံ့ခြင်းအားဖြင့်ရှုပ်ထွေး ATSC 3.0 စံချိန်စံညွှန်းများ၏မွေးစား ...
2017 NAB ပြရန်မှာ VPX ရဲ့ Virtual ထုတ်လုပ်မှုဆာဗာစမ်းကြည့်ရန်မှ ChyronHego
MELVILLE, နယူးယော့ - ဧပြီလ 13, 2017 - ChyronHego ယနေ့သူတို့ 2017 NAB Show မှာက၎င်း၏ All-သစ်ကို VPX ရဲ့ Virtual ထုတ်လုပ်မှုဆာဗာ preview လိမ့်မယ်ကြေညာခဲ့သည်။ VPX အဆုံးမှအဆုံးသို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု Workflows hosting တစ်ခုက virtual server ကိုပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ VPX အင်အားကြီးအလွန်အမင်းအကျိုးရှိစွာတစ် virtualized, အိုင်တီ-based ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရေးပါသောအကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကို software ကို run ဖို့အသံလွှင့်သတင်းစစ်ဆင်ရေးအားဖွင့်ခြင်းအားဖြင့်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့် ...
DigiLink နှင့် InfinityLink ပလက်ဖောင်းများအဘို့ Element ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုယဇ်ကိုပြုရမည် Expand မှ Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ
WESTFORD, Mass - ။ ဧပြီလ 6, 2017 - Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ, ဆန်းသစ်, Real-time ၏လောကဓာတ်-class ကိုပံ့ပိုးပေးသူ, မာလ်တီမီဒီယာပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ, ယနေ့မှာကုမ္ပဏီ၏ DigiLink နှင့် InfinityLink မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းအသစ်ဒြပ်စင်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထူးခြားစေမည့်အစီအစဉ်များကိုထုတ်ပြန်ကြေညာ 2017 NAB ပြရန်။ ကွန်ယက်ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများတိုးချဲ့အပေါင်းတို့နှင့်-IP ကို, တိုးတက်လာသောကွန်ယက်ကိုရရှိနိုင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပွနျလညျထူထောငျဆီသို့ပြောင်းရွှေ့အဖြစ်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ Artel ရဲ့တိုးချဲ့ ...
မိုးတိမ်မှတစ်ဆင့် OTT မီဒီယာထုတ်ယူခြင်း၏ထိရောက်မှု Boost မှ Encoding.com အတူ Viaccess-Orcas အပေါင်းအဖေါ်များ
ပဲရစ် - မတ်လ 23, 2017 - Viaccess-Orcas, အကြောင်းအရာန်ဆောင်မှုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တိုးမြှင့်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်များနှင့် Encoding.com, မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစျေးကွက်အတွက်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော cloud-based ကိုဗီဒီယိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဝန်ဆောင်မှုမှပူးပေါင်းခဲ့ကြ OTT multiscreen application များအတွက် VOD အကြောင်းအရာ၏ပြင်ဆင်မှုချောမွေ့။ တစ်န်ဆောင်မှု (TVaaS) အဖြစ်နေရာတိုင်းမှာ Viaccess-Orcas ၏ cloud-based တီဗီယခုဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ် ...
Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့် Pontis Technologies ကအမေရိကန်လက်တင်ဒေသတွင်း၌မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးခေါင်းဆောင်များမှဦးဆောင် OTT နှင့် CDN န်ဆောင်မှုဆောင်ကြဉ်း
Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့် Pontis Technologies က Verizon ကဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကနေဦးဆောင်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းပေါ် over-the-ထိပ်တန်းစေမည်တဲ့ Multi-တစ်နှစ်မိတ်ဖက် (OTT) ကြေညာဖို့ကျေနပ်နဲ့ content ပေးပို့ကွန်ရက် (CDN) ဝန်ဆောင်မှုများများမှာ လက်တင်အမေရိကတစ်လျှောက်လုံးထုတ်လွှင့်နဲ့ content ကြေညာသူမှမရရှိနိုင်န်ဆောင်မှုများ။ အဆိုပါ Uplynk ဗီဒီယိုလွှဝန်ဆောင်မှုနှင့် Verizon ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကနေ Edgecast အကြောင်းအရာ Delivery Network မှ ...